ယောဂသည် Fibromyalgia ကိုမည်သို့သက်သာစေနိုင်သနည်း ယောဂ fibro များအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာကုသမှု?
ယောဂသည် Fibromyalgia ကိုမည်သို့သက်သာစေနိုင်သနည်း
23 / 05 / 2018 /0 မှတ်ချက်/i အရည်အသွေးအဆောင်းပါးများ/av ရေတံခွန်
ဤတွင် fibromyalgia ကဲ့သို့သောနာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါများကိုသက်သာစေရန်ယောဂမည်သို့ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည်ကိုဤတွင်သင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
Fibromyalgia နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါသည်ကြွက်သားများနှင့်အရိုးများကိုသိသိသာသာနာကျင်စေသည့်အပြင်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကဲ့သို့သောသိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းဖြစ်စေသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းယခုလေ့လာမှုများစွာအရယောဂသည်ဤအားနည်းသောလူနာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်မကြာခဏရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှု၊ ခေတ်သစ်ကုထုံး၊ အနှိပ်၊
ယောဂသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်သူတို့၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သောလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ယောဂသည်အပန်းဖြေခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ ဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူနည်းစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည် - ၎င်းသည်လေ့ကျင့်သူအားမိမိကိုယ်ကိုပိုမိုသတိရှိရန်၊ ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နာကျင်မှုအပြင်အခြားအရာများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်။ Tai chi နှင့် qi gong တို့မှာနာတာရှည်နာကျင်မှုခံစားနေရသူများအတွက်အကျိုးရှိနိုင်သောအခြားအပန်းဖြေကုသမှုပုံစံနှစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ယောဂသည်လူတိုင်းအတွက်လုံးဝမသင့်တော်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်းကံကောင်းထောက်မစွာပင်အပြင်းထန်ဆုံးနာကျင်မှုခံစားနေရသောသူများအတွက် (ဥပမာအားဖြင့်အပန်းဖြေရေးယောဂ) နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကွဲပြားသောဗားရှင်းများစွာရှိသည်။ ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်သောယောဂအမျိုးအစားများကိုဖော်ပြပါမည်။
fibromyalgia ရှိသူများအတွက်မည်သည့်ယောဂအမျိုးအစားသည်မည်သည့်ယောဂအမျိုးအစားနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းလေ့လာမှုများကမသတ်မှတ်နိုင်သော်လည်း၊ ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်၎င်း၏နာကျင်မှုပုံစံပေါ် မူတည်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောယောဂအမျိုးအစားများသည်လူအများစုအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းလူသိများသည်။ ပိုကောင်းတဲ့လမ်းအတွက်နာကျင်မှုနှင့်တင်းမာမှုအဆင့်ကိုလျှော့ချရန်။
ယောဂနှင့် fibromyalgia: သုတေသနပြုချက်ကဘာလဲ။
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သောလေ့လာမှုများသည်အထူးသဖြင့် fibromyalgia နှင့် yoga တို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော်ယောဂတွင်အခြားအပြုသဘောဆောင်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြလိုသည်။ လေ့လာမှုများစွာအရယောဂသည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ကျစေသည့်အပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ယောဂကျင့်ခြင်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းကို“ စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း” ဟုခေါ်သော cortisol ဟုခေါ်သောဟော်မုန်းဖြစ်ပေါ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းသောခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဦး နှောက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
အပ်စိုက်ကုထုံး: အပ်စိုက်ကုထုံးအပ်စိုက်ကုထုံးအပ်များဖြင့်ကုသခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ကုသမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကြွက်သားများတင်းကျပ်စွာမှေးမှိန်သွားခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားနှင့်ရွတ်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ကုသမှုကိုအများပြည်သူလိုင်စင်ရဆရာ ၀ န်ထမ်းများမှလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
အနှိပ်: ကြွက်သားနည်းစနစ်များနှင့်အနှိပ်သည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကြွက်သားတင်းမာမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဤကုသမှုပုံစံသည်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ခေတ်သစ် Chiropractic: Fibromyalgia သည်ကြွက်သားနှင့်အဆစ်နာနှစ်မျိုးလုံးပါ ၀ င်သောအခြေအနေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, ခေတ်မီ chiropractor (ကြွက်သားများနှင့်အဆစ်နှစ်ခုလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သူတစ် ဦး) နောက်ကျော၌ fibro ကြောင့်ထိခိုက်သူတစ် ဦး အဘို့အရွှေအတွက်၎င်း၏အလေးချိန်တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံတွင်သင်သည်နက်ရှိုင်းသောကြွက်သားများကိုဖြေလျှော့ရန်အပိုလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်လိုအပ်သည် - ထို့နောက်၎င်းသည် chiropractic ပူးတွဲစည်းရုံးခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိသည်။
အိပ်စက်ခြင်းတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး: fibromyalgia ရှိသူများအတွက်အိပ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းသန့်ရှင်းခြင်းဆိုသည်မှာတစ်နေ့တည်းနှင့်တစ်နေ့တည်းတွင်အိပ်ရာဝင်ခြင်းနှင့်ညအိပ်စက်ခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်နေ့ခင်းဘက်ခဏတာမှေးစက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။
ယောဂသည်သင့်အတွက်တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ ၌နာကျင်မှုလျော့နည်းသွားစေပြီးလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည့်အတွက်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: - သင့်တွင်သွေးခဲရှိပါကမည်သို့သိမည်နည်း။
Option ကို C: လိုက်နာပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာ (ဒီမှာနှိပ်ပါ)
Carson et al, 2010, fibromyalgia ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တစ် ဦး ကလေယာဉ်မှူးကျပန်း Awareness ၏အစီအစဉ်၏ randomized ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။
fistomyalgia များအတွက် Mist et al, 2013. ဖြည့်စွတ်ခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာလေ့ကျင့်ခန်း: meta-analysis သည်။
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/slik-kan-yoga-lindre-fibromyalgi-3.jpg?media=1648573622 370 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2018-05-23 14:24:562018-05-23 14:30:57ယောဂသည် Fibromyalgia ကိုမည်သို့သက်သာစေနိုင်သနည်း
၉ ခြေထောက်တွင်သွေးခဲအစောပိုင်းလက္ခဏာများ အထက်ပေါင်နာကျင်ခြင်း - အကြောင်းရင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်း